Daraasad laga sameeyey halis kusoo wajahan Muslimiinta & ajnabiga ku dhaqan Galbeedka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Daraasad laga sameeyey halis kusoo wajahan Muslimiinta & ajnabiga ku dhaqan Galbeedka
Daraasad laga sameeyey halis kusoo wajahan Muslimiinta & ajnabiga ku dhaqan Galbeedka
(Hadalsame) 23 Nof 2020 – Jimcihii waxaa la faafiyay daraasad cusub oo ku saabsan xagjirka caddaanka midigta fog iyo sida ay u xoogaysanayaan iyo sida ay isu gu xidhan yihiin. Wasiirka arrimaha debedda Jarmalka Heiko Maas oo taa soo bandhigay ayaa arrinka u ga hadlay si dhiillo leh.
“Waa dhaqdhaqaaqyo cusub oo xuduudaha ka tallowsan kuwaas oo aan lahayn hoggaan aadna u arxan daran oo u halis badan”, ayuu yidhi. Intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2020 aad bay u korayaan oo u kordhayaan.
Kooxahan oo loo arko halistoodu mid nolosha dadka soo afjari karta wax ay halhays u lee yihiin “Isku beddelka weyn”. Isku beddelka weyn ee ay sheegayaan waa dadka soogalootiga ah oo barabixiya oo qabsada dadyowga caddaanka ah.
Siyaasadda uu ku dhaqmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump qayb bay ka tahay dacaayaddan. Xagjirkani sannadkan cudurka COVID-19 dunida saarnaa xayiraadda dawladuhu soo rogeen wax ay u adeegsadeen mu’aamarad la gu meelmarinayo dhaxalwareejintooda, taageerayaal cusub ayayna ku soo jiiteen. Wax ay dhaqdhaqaaqooda u gudbiyeen Ruushka iyo Yurubta Bari oo aan awal aydoolojiyaddoodu gaadhsiisnayn.
Taariikhyahannadu wax ay isha ku hayaan sida ay isu shabbahaan dacaayadda xagjirkan cusub ee ah “dadka qalaad baa ina qabsanaya oo dhiiggeenna iyo dhaqankeenna beddelaya” iyo sidii uu ku soo baxay xisbigii Naziga Jarmalku qarnigii hore oo ahayd “Yuhuud baa ina dhalanrogaysa oo ina qabsanaysa”.
Wasiirku wax uu ku baaqay dadkan joojintooda in dawladuhu isu kaashadaan.
Previous articleGOOGOOSKA & SAWIRRADA: SSC Napoli vs AC Milan 1-3, Liverpool vs Leicester City 3-0 (Milan oo hoggaanka ku mintidday)
Next articleDHEEL ISTARAATIJI AH: Turkiga oo ka faa’iidaystey khalad wayn oo ay Iiraan ka samaysay dagaalka Nagorno-Karabakh (Qaybtii 2-aad)